Fitsarana vaovao manohitra an'i Apple amin'ny fampihenana ny toerana malalaka misy amin'ny iOS 8 | Vaovao IPhone
Misy fomba tsara kokoa hanombohana ny taona noho ny fanenjehana an'i Apple vaovao? Ny orinasa Cupertino dia hita eo amin'ny fitsarana indray ary amin'ity indray mitoraka ity dia noho ny fihenan'ny habaka malalaka ho an'ny mpampiasa aorian'ny fametrahana ny iOS 8. Raha ny filazan'ny mpitory, ary ny mpitsara dia nahita porofo ampy fa mety manana antony izy satria ny mitohy ny fizotrany, ny habaky ny fitaovana Apple sasany dia azo ahena hatramin'ny 23,1% amin'ny tranga ratsy indrindra aorian'ny nametrahana ny iOS 8. Ny olana dia ny Apple (toy ny sisa amin'ireo mpanamboatra) manao dokambarotra ny maodeliny misy fahaiza-manao 8, 16, 32 , 64 sy 128GB raha ny tena izy dia kely kokoa ny fahaiza-manao, satria izay nohanin'ny rafitra miasa dia tsy misy fihenam-bidy. Hodinihinay eto ambany ny angona.
Toerana malalaka (iOS 7.1.2)
Toerana malalaka (iOS 8 GM)
iPod Touch 5G 32GB 27.3GB 26.6GB
iPad Mini Retina 16GB 12.3GB 11.0GB
Ity latabatra ity dia mety ho ohatra iray hanehoana ny fihenan'ny habaka malalaka misy amin'ny fanavaozana vaovao avy amin'i Apple. Ny fitaovana voakasik'izany dia ireo izay efa nahita ny fahaizany nihena be tamin'ny iOS 7, ary nahita azy io nahena kokoa noho ny iOS 8, miaraka amin'ny 16GB iPad Mini Retina ho fitaovana mafy indrindra, miaraka amin'ny 11GB maimaim-poana ho an'ny mpampiasa, 1,3GB latsaky ny tamin'ny kinova taloha, zavatra tsy azo eritreretina.
Ny rafi-piasana tsirairay dia mila habaka bebe kokoa dia saika miharihary, zavatra iray izay ampitomboin'ny zava-misy fa mihabetsaka ny habaka no ampiasain'ny fampiharana noho ny fitaovana vaovao. Fampiharana namboarina tsara ho an'ny iPhone 6 sy 6 Plus vaovao sy manerantany, manan-kery ho an'ny iPhone sy iPad, misy ny sary, sary masina ary fisie ilaina rehetra hiasa amin'ny fitaovana Apple tsirairay avy izy io, na dia tena ampiasainao aza izany. ampiasaina amin'ny iray. Ny vahaolana dia efa nampiharin'i Apple, fa ny ampahany ihany. Raha tokony hizara amin'ny fitaovana 16GB ary manomboka amin'ny fahaiza-manao 32GB, ny zavatra nataony dia manomboka amin'ny 16GB ary mitsambikina ka hatramin'ny 64GB mizara 32GB. Ankehitriny dia misy ny € 100 (mihoatra ny kely) eo amin'ny 16 sy 64GBKely lavitra noho ny teo aloha, fa ny fitaovana mora vidy ihany dia misy 16GB fotsiny ka maharitra ny olana ho azy ireo. Raha raisina fa ny fitaovana Apple dia tsy azo itarina amin'ny fahaizany, tsy maintsy manombatombana tsara isika alohan'ny mividy iray raha toa ka tsy mendrika ny handany kely kokoa sy hanana 64GB na dia mieritreritra aza isika fa tsy hamita azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Fitsarana vaovao manohitra an'i Apple amin'ny fampihenana ny toerana malalaka misy amin'ny iOS 8
Ny iOS 8 dia mitaky toerana fahatsiarovana bebe kokoa amin'ny iPhones